ဥရောပကော်မရှင်သည် Telestream Lightspeed Live နှင့် Vantage Transcoding များအားပါဝင်သည့်အကြောင်းအရာများအတွက်ပံ့ပိုးမှုပလက်ဖောင်း၏ဗဟိုတွင်နေရာချခြင်း | NAB သတင်းများ | 2020 NAB Show Media Partner နှင့် NAB Show LIVE ၏ထုတ်လုပ်သူ။ အသံလွှင့်အင်ဂျင်နီယာသတင်း
ပင်မစာမျက်နှာ » သတင်း » တိုးတက်လာသောအကြောင်းအရာဖြည့်ပံ့ပိုးပလက်ဖောင်းများ၏နှလုံးမှာဥရောပကော်မရှင်နေရာများ Telestream Lightspeed တိုက်ရိုက်နှင့် Vantage Transcoding
တိုးတက်လာသောအကြောင်းအရာဖြည့်ပံ့ပိုးပလက်ဖောင်းများ၏နှလုံးမှာဥရောပကော်မရှင်နေရာများ Telestream Lightspeed တိုက်ရိုက်နှင့် Vantage Transcoding
နီဗားဒါးစီးတီး, ကယ်လီဖိုးနီးယား, သြဂုတ်လ 31, 2017 - Telestream, ဒစ်ဂျစ်တယ်မီဒီယာကိရိယာများနှင့်လုပ်ငန်းအသွားအလာဖြေရှင်းချက်တစ်ခုဦးဆောင်ပေးသူ၎င်း၏၏အောင်မြင်သော installation ကိုကြေညာခဲ့သည် Vantage® မီဒီယာထုတ်ယူခြင်းပလက်ဖောင်း နှင့် Lightspeed တိုက်ရိုက်ဖမ်းယူ ဘရပ်ဆဲလ်, ဘယ်လ်ဂျီယံအတွက်ဥရောပကော်မရှင်အတွင်းစနစ်။ ပေါ်အပြေး Telestream'' s ကို Lightspeed K80 GPU ကိုဆာဗာများကိုအရှိန်, Vantage ကော်မတီနှင့်အစည်းအဝေးအဆောက်အဦ၏ဥရောပကော်မရှင်ရဲ့ကွန်ယက်ကိုတစ်လျှောက်လုံးမဟာဗျူဟာမြောက်ပြည်တွင်းရေးနှင့်ပြင်ပဆက်သွယ်ရေးအခြေခံအဆောက်အဦများထောက်ပံ့နှင့်အတူတာဝန်ပေးဆောင်ရွက်ထားတဲ့ကော်မရှင်ရဲ့ညွှန်ကြားမှုအထွေထွေဆက်သွယ်ရေးမှ transcoding အဆောက်အဦ (DG Com), ပေးပါသည်။
အဆိုပါ Vantage Lightspeed တိုက်ရိုက် system ကိုယခုနှစ်မတ်လအတွင်းဥရောပကော်မရှင်မှာနထေိုငျသှားကွ၏။ စီမံကိန်းတစ်လျှောက်လုံး Telestream ဒေသခံရုပ်သံလိုင်းမိတ်ဖက်, ဘရပ်ဆဲလ်အခြေစိုက် VP မီဒီယာ Solutions နှင့်အတူနီးကပ်စွာအလုပ်လုပ်ခဲ့သိရသည်။ VP မီဒီယာ Solutions ထုံးစံ Workflows ၏ဒီဇိုင်းနှင့် DG Com ပေးခဲ့သည်စနစ်ဖြင့်ပေါင်းစည်းမှုအပါအဝင်စနစ်, installed နှင့်တာဝန်။
DG Com provides audio visual content from all the European Commission activities – past and present dating back to 1948 – to broadcasters and other agencies. The organization operates two contribution ဂြိုဟ်တု TV channels (EbS & EbS+) as well asaweb portal where clean feed content is available free of charge and free of rights. The task of supplying content appropriate to the broadest range of media outlets is considerable: each piece of content is provided as hi-res, lo-res and audio-only files, together with thumbnail browsing images and 25 different language tracks.
pre-မှတ်တမ်းတင်ထားသောအကြောင်းအရာတစ်ခု GV Stratus server ကိုမှ MXF ဖိုင်အဖြစ်ထောက်ပံ့နေသည်။ Vantage, DG Com ရဲ့အိမျမီဒီယာပိုင်ဆိုင်မှုစီမံခန့်ခွဲမှုနှင့်အတူနီးကပ်စွာအလုပ်လုပ်ကိုင် (ပေးခဲ့သည်) စနစ်, DG Com ဖြန့်ဖြူးမှုစနစ်အတွက်မတူညီသောဖိုင်မျိုးကွဲသို့ထိုအ transcodes ။ အဆိုပါ Vantage စနစ်ကတစ်ဦးကိုအစားထိုး သဟဇာတ ကာဗွန် coder တွေက၎င်း၏ထောက်ခံမှုအသက်တာ၏အဆုံးသို့ရောက် လာ. နှင့်အထူးသဖြင့်အမြန်နှုန်းနှင့်စွမ်းဆောင်ရည်ကို၏စည်းကမ်းချက်များ၌, DG Com ရဲ့ဖြစ်ပေါ်နေသောလိုအပ်ချက်များကိုဖြည့်ဆည်းရန်ပျက်ကွက်သည့်လယ်ယာ transcode ။
"DG Com အမျိုးမျိုးသော options များသုတေသနပြုခြင်းနှင့် Vantage ကိုအကောင်းဆုံးအစားထိုးအဖြစ်တပ်ဆင်တွေ့ရှိခဲ့" Bart Snoeks, VP မီဒီယာ Solutions မှာတီဗီ Solutions ဗိသုကာ commented ။
"Vantage ကို install DG Com များအတွက်အဓိကလှုံ့ဆျောမှုမှတိုက်ရိုက်ထုတ်လွှ feeds တွေကိုယူဖို့အတွက်ပလက်ဖောင်းရဲ့စွမ်းရည်အတွက်တည်ရှိသည် Telestream Lightspeed တိုက်ရိုက် server ကို Capture နှင့်ဖြစ်ရပ်နေဆဲဖြစ်ပျက်နေသည်ပင်အဖြစ်အရည်အသွေးမြင့်ဖိုင်တွေသို့သူတို့ကိုငါ transcode ။ သတင်းထုတ်လွှင့်ရန်အချိန်-အရေးပါသောအကြောင်းအရာပေးတဲ့အခါဒီအထူးသဖြင့်အကျိုးရှိသောဖြစ်ပါတယ် "ဟု Snoeks နေဆဲဖြစ်သည်။ "သူတို့အရင် transcode သည့်စနစ်နှင့်အတူက Lightspeed တိုက်ရိုက်နှင့် Vantage DG Com နှင့်အတူသော်လည်းမိနစ်အနည်းငယ်အတွင်းဥရောပကော်မရှင်ရဲ့ကွန်ရက်စာမျက်နှာအကြောင်းအရာကိုမကယ်မလွှတ်နိုင်, တစ်နာရီခန့်ကြာမြင့်မယ့်အစည်းအဝေးကနေအသံသွင်း၏ဝဘ်ဗားရှင်းထုတ်လုပ်ရန်နှစ်ခုမှသုံးနာရီအတွင်းယူနိုင်ခြင်း အစည်းအဝေးရဲ့အဆုံး၏။
"စွမ်းဆောင်ရည်ဒီလိုကော်မရှင်ထုတ်လွှင့်ခြင်းနှင့်သတင်းအေဂျင်စီများရန်နှင့်အီးယူ၏နိုင်ငံသားများမှပေးနိုငျသောဝန်ဆောင်မှုအရည်အသွေးအမှန်တကယ်ကွာခြားချက်စေသည်," Bart Snoeks ကဆက်ပြောသည်။
ထို့အပြင်အီးယူ DG Com မှာ Vantage စနစ်ကတစ်ဦးနှင့်အတူပေါင်းစည်းဖြစ်ပါတယ် Telestream Vidchecker နေသူများကဖန်တီးသောအကြောင်းအရာများ၏အရည်အသွေးစိစစ်ဖို့ QC စနစ်။ Vantage ၏ DG Com ရဲ့ရွေးချယ်ရေးအတွက်နောက်ထပ်အချက်တစ်ချက်အကြောင်းအရာအသုံးပြုမှုစောင့်ကြည့်နှင့်၎င်း၏အကြောင်းအရာထုတ်လွှင့်နှင့်အခြားအေဂျင်စီများကအသုံးပြုနေသည်ဘယ်လောက်ကျယ်ပြန့်သရုပ်ပြစာရင်းအင်းရည်ရွယ်ချက်များအတွက် DG Com အသုံးပြုတဲ့ Civolution Teletrax ရေမှတ်စနစ်, နှင့်အတူ၎င်း၏အနီးကပ်ပေါင်းစည်းမှုဖြစ်ခဲ့သည်။
ပေါင်းစည်းမှု က Ultra HD ဖိုရမ် 2017-08-31
ယခင်: DNF Ensemble Designs '' BrightEye NXT Router အတွက် IP-အခြေပြုထိန်းချုပ်ရေးကမ်းလှမ်း
နောက်တစ်ခု: Riedel to Partner With PTScientists for Mission to the Moon, Where ‘Failure Is Not an Option’